Taksiborosy Sprinter niala moto- RN4: Olona 4 maty tsy tra-drano, mpandeha 20 naratra mafy | NewsMada
Par Taratra sur 19/06/2021
Olona roa tamin’ilay moto no namoy ny ainy teo no ho eo. Mpandeha 20 tao anatin’ilay taksiborosy Sprinter no voalaza fa naratra mafy, lehilahy roa maty. Ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, nitranga, omaly maraina, tao Andakana, kaominina Andranolava, distrikan’i Marovoay (RN 4), omaly maraina.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray ny lalam-pirenena fahefatra, omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora. Tra-doza tamin’izany ny taksiborosy mampitohy an’Antsohihy sy Mahajanga teo amin’ny PK 525 +800 Berivotra, fokontany Anda­kalaka, kaominina ambani­votr’Antanambao-Andrano­lava, distrikan’i Marovoay. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tafakatra efatra ireo olona namoy ny ainy. Olona 15 hafa koa naratra mafy, ankoatra ireo, olona telo ihany koa mbola marary tsy mahatsiaro tena. «Nifampilahatra ny taksiborosy Sprinter roa hamonjy an’i Mahajanga, avy eo naka sisiny ny iray tamin’izy ireo, niala lavaka tamin’ny “dos d’âne” sady niditra fiholahana. Teo no nifanena tampoka tamina moto nanao taingin-telo avy any Mahajanga ny fiara», hoy ny fanazavan’ny brigade de la police routière (BPR). Mafy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta ka nivadibadika avy hatrany ny taksiborosy ary noraofiny niaraka taminy ilay moto. Samy tsy nisy tafajanona na ilay moto na ilay fiara fa nifatratra tany an-tokotanin’olona. Vokany, olona roa tamin’ireo nandeha moto no maty teo no ho eo voatsindrin’ny entana tao anaty tatatra dia ny zazalahy 8 taona sy ny rainy 41 taona.
Naratra mafy tamin’izany ny vehivavy iray, vadin’ilay lehilahy mpitondra moto sy ny renin’ilay ankizilahy namoy ny ainy. Maty tsy tra-drano ihany koa ny lehilahy roa 26 sy 34 taona, mpandeha tao anaty ny taksiborosy.
Taorian’izay, tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina avy ao amin’ny faritra Boeny. Nalefa vonjimaiaka tao amin’ny hopitaly An­drova-Mahajanga avokoa ireo tra-doza. Olona 15 tao anatin’ilay taksiborosy no naratra mafy sy mbola manaraka fitsaboana ary olona telo hafa no mbola tsy mahatsiaro tena, hoy ny fanazavan’ny zandary.
« Surveillante ao amin’ny CRINFP na Institut national de formation pédagogique ao Mahabibo ilay ramatoa nandeha moto », hoy hatrany ny loharanom-baovao. Nanao fanambarana ny governoran’ny faritra Boeny sy ny mpiara-miasa aminy rehetra fa maneho fiaraha-miory amin’irreo fianakavian’ireo namoy ny ainy. Ary mirary fahasitranana feno ho an’ireo maratra.